ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): ကြွက်ကုန်သည် (၁)
🐭 ကြွက်ကုန်သည် 🐭
တခါတုန်းက ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့  အထူးအရေးပေးအားထားခံရတဲ့ အကြံပေးပညာရှိကြီးတစ်ဦးဟာ ဘုရင်နှင့် အခြား အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါ တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ရှိတာမို့ အိမ်ကနေ ထွက်လာခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူသွားနေတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ သေနေပြီဖြစ်တဲ့ ကြွက် တစ်ကောင်ကို သူ မျက်လုံးဒေါင့်ကနေ လှမ်းပြီးတွေ့ လိုက်ရတယ်။ ဒီအခါ သူနှင့်အတူပါလာတဲ့သူတွေကို ပညာရှိကြီးက ''… ဒီလိုကြွက်သေလို သေးမွှား မပြောပလောက်ပါဘူးလို့ထင်ရတဲ့ မူလမြစ်ဖျားကနေတောင် လုံ့လရှိပြီး တက်ကြွကြိုးစားတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ ဥစ္စာစီးပွား အမြောက်အများ ကို ရှာဖွေရယူနိုင်ဖို့ အခွင်အရေးကိုရနိုင်တယ်။ အလုပ်လည်း ကြိုးစားမယ်၊ ဉာဏ်ကိုလည်းအသုံးချမယ် ဆိုရင် သူဟာ သူ့ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အစပြုတည်ထောင်နိုင်ပြီးတော့သူ့ဇနီးနှင့် မိသားစုကိုပါ စောင့်ရှောက် ပံ့ပိုးပေးနိုင်လိမ့်မယ်။''လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ပညာရှိကြီးပြောလိုက်တဲ့ မှတ်ချက်စကားကို အဲဒီလမ်းပေါ်ကနေ ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ လူ တစ်ယောက်က ကြားသွားတယ်။ အဲဒီကြားသွားတဲ့သူက အခုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ထင်ရှားတဲ့အကြံပေးပညာရှိကြီးတစ်ဦး ဆိုတာကိုပါ သိလိုက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စကားအတိုင်း ကြိုးစားလိုက်နာပြီး လုပ်ကြည့်ဖို့ကို သူ စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူဟာ ကြွက်သေကို အမြီးကနေ ကောက်ကိုင်ပြီး ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ အဲဒီလူ ကံသာနေချိန်မို့နေပါလိမ့်မယ်။ သူသွားလို့ လမ်းတစ်ပြလောက်မရောက်ခင်မှာပဲ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက သူ့ကို ဆီးတားလိုက်တယ်။ '' ငါ့ကြောင်လေးကွာ၊ တမနက်လုံး ဘာမှမစားရသေးလို့ပါ။ ဒီမှာ ကြေးပြား၂ပြားယူလိုက်ပါ။ ဒီကြွက်ကို ရောင်းခဲ့ပေးပါ။'' လို့ ပြောတယ်။ သူလည်း ရောင်းခဲ့ပေးလိုက်တယ်။
ရရှိလာတဲ့ ကြေးနှစ်ပြားနဲ့ သူဟာ မုန့်ချိုတွေကို ဝယ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်တော့ သောက်ရေတွေနှင့်အတူ လမ်းရဲ့ တဖက်မှာ စောင့်ပြီးနေလိုက်တယ်။ သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ပန်းကုံးတွေမှာ သီထည့်နိုင်ဖို့ ပန်းခူးသွားကြသူတချို့  အဲဒီအလုပ်ကနေ ပြန်လာကြတယ်။ သူတို့ခမြာ မောကလည်း မော၊ ဆာကလည်း ဆာနေကြပြီမို့ မုန့်ချိုနှင့်ရေ ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ သူတို့မှာ ပါလာတဲ့ ပန်းစည်းတွေထဲက တစ်ယောက် တစ်စည်းနှုန်းပေးပြီး လူငယ်ဆီက မုန့်ချိုတွေနှင့်ရေ ကို ဖလှယ်ဝယ်ယူလိုက်ကြတယ်။ ရလာတဲ့ ပန်းစည်းတွေကို လူငယ်က ညနေစောင်းမှာ မြို့ ထဲသွားပြီးလိုက် ရောင်းတယ်။ ပန်းရောင်းလို့ရတဲ့ ငွေထဲကနေ တခါ မုန့်ချိုတွေကို ထပ်ဝယ်ပြီး နောက်တနေ့မှာ ပန်းခူ့းအလုပ်သမားတွေကိုပဲ သွားပြန်ရောင်းပြန်တယ်။
(Ven. Kurunegoda Piyatissa ရဲ့  Buddhist Tales For Young & Old, Vol. 1, Prince Good Speaker မှ "Mouse Merchant" ကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:01 PM